February 3, 2021 - Padaethar
အမျိုးသား တွေ တန်ဖိုးအထားဆုံး ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဟာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ
February 3, 2021 by Padaethar
“ချစ်သူတို့ သိထားဖို့” ကိုယ်တန်ဖိုးထားရသူတွေ မဆုံးရူံးရအောင်…
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ငိုတာဟာ တကယ်ချစ်လို့ပါ။ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက် ငိုတာဟာ တကယ် မခွဲနိူင်လို့ပါ။ လူတစ်ယောက်က အပြုံးကို ဟန်ဆောင်ပြုံးပြလို့ရပေမယ့် မျက်ရည် ကိုတော့ ဟန်ဆောင်ငိုပြဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အပြုံးဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်ပေမယ့် မျက်ရည် ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တန်ဖိုးထားရသူအတွက်ပါ။ မခွဲနိူင်လို့ ငိုငို ၊ တကယ်ချစ်မြတ်နုိူးလို့ပဲ ငိုငို ကိုယ်တန်ဖိုးထားရသူတွေ မဆုံးရူံးရအောင်…. (၁) အတ္တ တွေကို လျော့ပါ (၂) စကားတစ်လုံးကို ဆုံးအောင်နားထောင်ပါ (၃) သစ္စာ ရှိပါ (၄) ကြားစကား ၊ ဘေးပြောစကားထက် ချစ်သူစကားကို အကုန်သိအောင် နားထောင်ပေးပါ။ (၅) နားလည်မှူလွဲသွားရင် အကြောင်းအရင်းကို ရှာပါ (၆) စိတ်ဆိုးချိန်မှာ စကားမမှားအောင် သတိထားပြောပါ (၇) … Read more
ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ မနက်ခင်း အိပ်ရာနိုးနိုးခြင်းနဲ့ စတင်ပါတယ်။ မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်နေရင်းက လုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ်ပဲ နစ်နာရတာပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းမှာ ဒါတွေကို မလုပ်မိဖို့ လိုပါတယ်နော်…. (၁) တစ်မှေးပြန်အိပ်ခြင်း အိပ်ရာနိုးပြီဆိုတာနဲ့ တစ်မှေးလောက်ပြန်မှေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဦးနှောက်က အိပ်စက်မှုစက်ဝန်းကို ပြန်ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်နိုးလာရင်လည်း မူးနောက်နောက်ကြီး ခံစားနေရ တတ်ပါတယ် …။ (၂) ကော်ဖီသောက်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ လူကိုနိုးကြားစေတဲ့ ကော်တီဇောလို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုး အလိုလိုထွက်ရှိနေပြီးသားပါ။ ကဖင်းဓာတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကော်တီဇောဟော်မုန်းထွက်ရှိမှု အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ကော်ဖီသောက်လိုက်ရင် ကော်တီဇောဟော်မုန်းတွေ ထွက်ရှိမှု နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၃) ဖုန်းချက်ချင်းကိုင်ခြင်း မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာကို ချက်ချင်းဖွင့်ပြီး … Read more
နေ့နံ အလိုက်ဆောင်ရန် ကျောက်မျက်ရတနာ
နေ့နံ အလိုက်ဆောင်ရန် ကျောက်မျက်ရတနာ ဒီနေ့ မိတ်​ဆွေများအားအထူး ​ပြောပြချင်တာကတော့ မွေးရက် နေ့နံ အလိုက် ဆောင်ရန်ကျောက်မျက်ရတနာများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ် အရဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ ပိုစိတ်ဝင်စားမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆောင်ထားတာ ကတော့ အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီး ဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ထားလို့ရပါတယ်။ သင်ဟာ ကျောက်မျက်ရတနာ ဝတ်ဆင်တတ်သူ၊ တန်ဖိုးထားသူ ၊အထူးကြိုက်နှစ်သက်သူ ဖြစ်ပါက မဖြစ်မနေ သင်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ရတနာ လေးတွေ ကို နေ့နံအလိုက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ် ။ တနင်္ဂနွေ သား/သမီး ဖြစ်ပါက-ပတ္တမြားဆောင်ရပါမယ်။ တနလာင်္ သား/သမီးဖြစ်ပါက-ပုလဲ ​ဆောင်ရပါမယ် ။ အဂါင်္ သား/သမီး ဖြစ်ပါက သန္တာ ​ဆောင်ရပါမယ် ။ ဗုဒ္ဓဟူး သား/သမီး ဖြစ်ပါက မြ ဆောင်ရပါမယ် … Read more
လူတွေ ထင်မထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ တခုပြီးတခု ဆက်တိုက်လာမယ်တဲ့….
ဘာတွေများ ဖြစ်ဦးမှာလဲ မြန်မာ့အရေး ရော ကမ္ဘာ့အရေးပါ လူသားတွေက အဓိကမကျတော့ဘူ တဲ့…. ဝိဇ္ဇာနတ်တွေ နဲ့မိစ္ဆာ နတ်တွေ လွန်ဆွဲနေတာပါ တဲ့…. လူတွေ ထင်မထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ တခုပြီးတခု ဆက်တိုက်လာမယ်တဲ့…. မိစ္ဆာနတ်တွေက အဆမတန်များနေလို့ တန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်တွေ ကူညီလို့ရအောင် ကောင်းမူ့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်ဖို့ နဲ့ ငါးပါးသီလ လုံခြုံဖို့ တိုက်တွန်ုးပေးပါ…. အဲဒါဆိုရင် မြန်မြန်ပြီးလိမ့်မယ် တဲ့….. ဒီအတိုင်းသွားရင်တော့…. ပျက်စီးမူ့တွေ အများကြီး နဲ့ အချိန်အကြာကြီး ကြာလိမ့်ဦးမယ် တဲ့…. ကောင်းမူ့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်း နတ်တွေကို အမျှပေးကြပါတဲ့….. မှတ်ချက် ဘာပဲရေးရေး ဘာပဲပြောပြော အဆဲခံရမှာ မို့ ယုံကြည်ပါလို့ မပြောသလို မယုံကြည်နဲ့လို့လည်း မပြောလိုပါဘူး။ နားဝ ကြားသမျှကို ပြန်လည်မျှဝေတာပါ….။ ဘယ်သူပြောမှန်းမသိတဲ့အတွက် ဘာသက်သေပြချက်မှ … Read more
2021ခုနှစ် (2)လပိုင်းအတွက်တစ်လစာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း
မင်္ဂလာပါ 2021ခုနှစ် (2)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟာစာတမ်း 1.2.2021မှ 28.2.2021ထိ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် 1.2.2021မှ 28.2.2021ထိ (1)လစာဟောစာတမ်း သူတစ်ပါးငွေများ ကိုင်ခြင်း အာမခံခြင်းများ မလုပ်ပါနှင့်ပြသာနာ တက်ရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရေးတွင် အထူးကံကောင်းကျိုးပြုလာမည်။အချစ်ရေး၌ စန်းပွင့်ပြီး လူငယ်လူရွှယ်များအနေဖြင့် နှလုံးသားရေးရာများတွင် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကြောင့်စိတ်မောရတတ်သည်။ ပညာရေး၌ ရှေ့ပိုင်းကာလတွင် မရောင်မလည်ဖြစ်နေတတ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှအဆင်ပြေ အောင်မြင်နိုင်ကိန်းရှိသည်။ကျန်းမာရေးမှာ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိတတ်မည်။လူမှုရေး၌ အထူးလူချစ်လူခင်ပေါ်များမည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်စေကာမူ တပည့်လက်သားအလုပ်သမားတို့နှင့် အဆင်ပြေ တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်၏။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ဆုံးရှုံးထားသောငွေများ ပြန်လည်အဆင်ပြေလာမည်။ကား၊ကျောက်၊များအရောင်းဝယ်ကံကောင်းမည်။ ယတြာ။ ။မိမိမွေးနေ့တွင် ဇော်စိမ်း(၉)ခက်(သို့မဟုတ်) ဇွန်(၉)ညွန့်ဘုရားမှာလှူပေးပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like and Shareပေးကြပါ….။ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber) တနင်္လာသားသမီးများအတွက် 1.2.2021မှ 28.2.2021ထိ (1)လစာဟောစာတမ်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ခြင်း/ဌာနနေရာပြောင်းရခြင်းများ … Read more
ကျွန်နော်ဆေးရုံကို သွားရပါမယ်… ဆေးရုံမှာဆင်းရဲသားလူနာ​တွေမှအများကြီးပဲ ပစ်မထားနိုင်ဘူး
ကြှနျနျောဆေးရုံကို သှားရပါမယျ ဆေးရုံမှာဆငျးရဲသားလူနာ​တှမှေအမြားကွီးပဲ ပဈမထားနိုငျဘူး။ ကနျြးမာရေးဌာနတှဆေေးရုံတှမေသှားခငျြတဲ့သူမသှားပါနဲ့အာ့အတှကျမှတျခကျြပေးစရာဘာမှမရှိဘူး။ သှားတဲ့သူကလညျးကောငျးသောရညျရှယျ ခကျြနဲ့ မသှားတဲ့သူကလညျးကောငျးသောရညျရှယျခကျြနဲ့မို့ပါ။ ကိုယျနဲ့မတူတာကိုလညျးရနျသူလို့ ထငျနေ ကွတဲ့ comment တှကေိုဖတျပွီးပွုံးမိတယျ။ ဦးခှနျတော့သှားပါမယျဆေးရုံမှာသခေါနီး ဆငျးရဲသားလူနာ​တှမှေအမြားကွီးပဲ ပဈမထားနိုငျဘူး။ နိုငျငံအရေးဆိုပမေယျ့ပွညျသူတှရေဲ့ကနျြး မာ ရေးနဲ့အသကျက ပိုအရေးကွီးတယျလို့ခံယူပါတယျ။ ဦးခှနျ Zawgyi ကျန်းမာရေးဌာနတွေဆေးရုံတွေမသွားချင်တဲ့သူမသွားပါနဲ့အာ့အတွက်မှတ်ချက်ပေးစရာဘာမှမရှိဘူး။ သွားတဲ့သူကလည်းကောင်းသောရည်ရွယ် ချက်နဲ့ မသွားတဲ့သူကလည်းကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့မို့ပါ….။ ကိုယ်နဲ့မတူတာကိုလည်းရန်သူလို့ ထင်နေ ကြတဲ့ comment တွေကိုဖတ်ပြီးပြုံးမိတယ်။ ဦးခွန်တော့သွားပါမယ်ဆေးရုံမှာသေခါနီး ဆင်းရဲသားလူနာ​တွေမှအများကြီးပဲ ပစ်မထားနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံအရေးဆိုပေမယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်း မာ ရေးနဲ့အသက်က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူပါတယ်။ ဦးခွန် If you do not want to go to health centers or hospitals, do not go The … Read more